यी हुन् विश्वकै सर्वाधिक तलब खाने सिइओहरु, कसको तलब कति ?
एजेन्सी । एउटा सिइओको वार्षिक आम्दानी कतिसम्म हुनसक्ला ? हरेक देशका आफ्ना आफ्नै नियम तथा कानुनहरु रहेका छन् । यस्ता कम्प्लेक्स संरचनाका कारण उनीहरुको आम्दानी हिसाब यति हो भन्ने छैन ।
प्याट्रिक को हुन् ? दक्षिण अफ्रिकामा जन्मेका यी व्यक्तिलाई विश्वले तब चिन्यो जब यिनी सर्वाधानि तलब पाउने सिइओको पहिलो नम्बरमा परे । उनले १३२.२ मिलियन अमेरिकी डलर स्टक अप्सनमा रहेबाफत पाउने गरेका छन् भने १५ मिलियन अमेरिकी डलर न्यान्टवेस्टको रेसट्रिकटेड ब्लक बाट पाउने गरेका छन् । उनी बायोटेक कम्पनीका सिइओ हुन् ।